Duuliye diyaarad helicopter military ayaa u tuuray kartoon ubaxyo ku jira haweenay uu… – Hagaag.com
Duuliye diyaarad helicopter military ayaa u tuuray kartoon ubaxyo ku jira haweenay uu…
Posted on 17 Agoosto 2020 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Mas’uuliyiinta Jarmalka ayaa baaraya diyaarad Helikobtar oo military ah oo ku duulaysay joog aad u hooseeya gobolka Waqooyiga Rhine-Westphalia, oo ujeedadu aheyd in ubaxyo ugu tuurto haweenay degeneyd tuulo ku taal degmada Sauerland.
Jimcihii, afhayeen u hadlay booliiska ayaa sheegay in baaritaanno lagu sameynayo ugu yaraan laba ka tirsan millatariga, duuliyaha iyo qof kale oo 44 jir ah, iyagoo lagu eedeeyey in ay dhici karto inay ku xadgudbeen sharciga duulista.
Sida xogaha lagu sheegay, helicopter-ka oo joog aad u hooseeya ku duuleysa ayaa tuurtay baakad cad, sida ay ku waramayaan wakaaladaha wararka ee Jarmalka, baakada ayaa ku dhex jiray ubaxyo uu askari wax jeclaa u tuuray naagta uu calmaday.
Afhayeen u hadlay booliska ayaa yiri “asalka saxda ee shilka wali waa la baarayaa”.
Sida laga soo xigtay goobjoogayaal, helikobtarka ayaa ku duulaysay joog aad u hooseeya tuulada Holzin muddo dheer Isniintii, ka dibna jooga duulista ayaa gaaray 5-10 mitir. Sidaa darteed Haweeney ka mid ah dadka deggen tuuladaasi ayaa booliska u sheegtay in helicopter ay jahwareer iyo cabsi iyo argagax ku riday fardaheeda oo markaasi daaqayay beerteeda.